ကြက်ပေါင်မုန့် - ကြော် | ကြော်တယ်။
Alicia tomero | 30/10/2021 17:54 | ကလေးများအတွက်မီနူးများ, ချက်ပြုတ်နည်းများ, ကြက်သားနည်းနည်းများ
ဒါလေးတွေပါ။ အရသာရှိသော ကိတ်မုန့်များ သင်သည် သူတို့ကို ချစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကို အိုးထဲတွင် empanadas တစ်ဝက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို မေတ္တာများစွာဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ ၎င်း၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်ဖြည့်စွက် ကြက်သားနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အထူးမုန့်စိမ်းနှင့်အတူဒါကြောင့်၎င်းသည်နှင့်အတူစုံလင်သည်။ puff pastry ။ စမ်းကြည့်ရဲတယ်၊ မတူဘူး၊ အရသာရှိတယ်။
ဖြည့်စွက်စာများဖြင့် ချက်ပြုတ်နည်းများကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် စမ်းလုပ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ 'အာလူးနှင့် ပါးပါးလှီးထားသော အသားနှင့် ပန်ကိတ်'.
အဘိတ်အချိန်: 45 မီတာ
အစိမ်း သို့မဟုတ် အေးခဲထားသော ပဲစေ့ ၂ ဇွန်း
ပြောင်းဖူးပြုတ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ဂျုံမှုန့်2ဇွန်း
မြေတပြင်လုံးနို့၏ 1 ဖန်ခွက်
ဖြီးဘို့ 1 ကြက်ဥ
ကျနော်တို့ထုခုတ် ကြက်သွန်နီ သေးငယ်သောအပိုင်းပိုင်းသို့။ ရေဆေးပြီး အခွံခွာပါ။ မုန်လာဥနီ နှင့်လည်း အပိုင်းပိုင်း ပိုင်းဖြတ်ပါမည်။. ဒယ်အိုးကျယ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ သံလွင်ဆီတစ်စက်လောက်လောင်းပြီး ပူလာတဲ့အခါ ကြက်သွန်နီနဲ့ မုန်လာဥနီတို့ကို ထည့်ပါ။ ငါတို့က တစ်မိနစ်လောက်ကြော်ထားလိုက်ပါ။
ငါတို့ဖြတ်ခဲ့တယ် အတုံးသေးသေး ကြက်သား၎ ငံပြာရည်ထဲသို့ ဆားနှင့် ငရုတ်ကောင်းနက်ထည့်ပါ။
ငါတို့ပေါင်းထည့် ပဲစေ့နှင့်ပြောင်း ပြီးလျှင် မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့် ပေါင်းထားပါ။
ဇွန်းနှစ်ဇွန်းထည့်ပါ။ ဂျုံမှုန့် ချက်ပြုတ်ရန် နှစ်လှည့်ပေးသည်။
ငါတို့သွန်းတယ် နို့, ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင် အပူပေးပြီး ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် စတင်လှည့်ပါသည်။
မီးဖိုထဲသို့ဝင်နိုင်သော မှိုတစ်ခုစီဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော မုန့်စိမ်းကို ပေါင်းထည့်ပါ။
ငါတို့ပြင်ဆင်ထားသည် puff pastry၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြည့်စွက်သွားမည့်မှိုများကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် လေးထောင့်အကွက်ငယ်များကို ဖြတ်တောက်လိုက်ပါ။
ကာဗာ ဦးထုပ်ပုံသဏ္ဍာန် puff pastry နှင့်အတူမှိုကိုသေးငယ်တဲ့အမြှောင်နှင့်အတူအလှဆင်။ တချို့က လုပ်တယ်။ သေးငယ်သော တြိဂံဖြတ်တောက်မှုများ ဒါမှ မီးဖိုမှာ ချက်တဲ့အခါ မုန့်စိမ်းက ရှူတယ်။ ကြက်ဥကို ခေါက်ပြီး မုန့်ဖုတ်မုန့်ရဲ့အပေါ်ကနေ ပွတ်ပေးပါ။ အတက်အဆင်းနဲ့ မီးဖိုထဲမှာ ထည့်ထားမယ်။ မိနစ် 180 အဘို့ 15 °. ပြုတ်တဲ့အခါ နွေးနွေးထွေးထွေး ကျွေးလို့ရပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ပြန်လည် » ကလေးများအတွက်မီနူးများ » ကြက်သားမုန့်